Nọmba anwansi nke China, ị maara ihe ọ bụ? | Akụkọ Njem
Maria José Roldan | | China, Asia njem
Onye ọ bụla nwere nọmba ọkacha mmasị ya, ma ọ bụ nọmba na-echeta ihe dị mkpa na ndụ ndị mmadụ. Mana maka omenaala ụfọdụ, ọnụọgụgụ karịrị nanị ọnụ ọgụgụ, ha nwere ike bụrụ akara aka chi., akara akara na augur good fortunes ma ọ bụ naanị na-abụghị.
Dịka ọmụmaatụ, na China nọmba anwansi ya bụ 8. Mana gịnị nọmba 8 nwere nke ọnweghị nọmba ọzọ nwere? Ma eleghị anya, ọ bụ ọdịdị ahụ, ebe ọ bụrụ na itinye nọmba 8 ahụ na ntanetị, ọ na-aghọ akara nke enweghị njedebe. Ihe nnọchianya dị oke mkpa maka ọtụtụ na maka ndị China.
Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata ihe kpatara China ji nwee nọmba anwansi na ihe kpatara na ọ bụ ọnụ ọgụgụ ahụ ma ọ bụghị nke ọzọ, gaa n'ihu na-agụ n'ihi na ị ga-enwe mmasị n'ihe niile m ga-agwa gị. Ma eleghị anya, mgbe nke a gasịrị, ị ga-ewerekwa nọmba a dị ka anwansi maka onwe gị.
1 Nọmba anwansi na China
2.1 N'egwuregwu olimpik
2.2 Womenmụ nwanyị dị ime chọrọ ụmụ ha
2.3 Ọtụtụ di na nwunye lụrụ
3 Anwansi nke 8
4 Nọmba 9 dịkwa mkpa
Nọmba anwansi na China
China bụ obodo nwere ọtụtụ ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme n'azụ ya. Naanị ị ga-eburu n'uche ihe ncheta oge ochie niile ọ nwere na kedu ka o nwere okpukperechi chi nke gara aga rue ta.
Mana dịka ha nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme, ọ bụkwa ọdịbendị na-ekwere ọtụtụ nkwenkwe ụgha. Ndị ọdịbendị ndị China na-eche na nkwenkwe ụgha nwere nnukwu ike na ekwesịghị ileghara ya anya. Kedu ọ bụrụ na ha dị, ọ bụ maka ihe ọ bụ ya mere ha ga-eji kwanyere ha ùgwù ma buru n'uche na ndụ ndị mmadụ.
Na August 8, 2008, ya bụ, na 08.08.08, enwe mmetụta dị iche n’etiti ndị niile bi na China, na mgbakwunye na asọmpi Olimpik., ha nwere otu iwe nke ihe a na-apụghị ịkọwa akọwa ha.
Ọtụtụ ihe mere taa na China nke metụtara nọmba asatọ na ụbọchị a na-apụghị ịkọwapụta maka ha. Ndị China chọrọ icheta 08.08.08/XNUMX/XNUMX dị ka ụbọchị kachasị mkpa na ndụ ha, ọ bụ ya mere ihe ụfọdụ na-adịghị ahụkebe ji mee.
A na-ewere nọmba 8 ka ọdịbendị ndị China na-atụle dị ka ọnụọgụ nke na-egosipụta ọdịmma, ọdịmma. Nke a bụ n'ihi na n'asụsụ Mandarin nọmba 8 dị ka "ba" ma yie nnọọ ka esi akpọ ya "ọgaranya." Ọ bụ n'ihi nke a na e hiwere egwuregwu Olympic na August 8, 2008 na elekere asatọ, 8 nkeji na sekọnd 8. Kpukpru n̄kpọ ẹkenyene ndifọn mma!
Womenmụ nwanyị dị ime chọrọ ụmụ ha
Kaosinadị, nke a abụghị sọsọ mmụọ nke ndị China gbasara ọnụọgụ 8. N'ụlọ ọgwụ, ọtụtụ ụmụ nwanyị dị ime rịọrọ ndị dọkịta ha ka ha mụọ ha ma ọ bụ ka ha rụọ ọrụ ịwa ahụ n'otu ụbọchị ka ụmụ ha wee mụọ n'ụbọchị ahụ nke ọma. Ma dika o doro anya, n'ihi otutu ochicho nke ndi di ime ka amuta umu ha n'ubochi a, Ndi dibia ekwenyeghi na aririo ha ebe obu na odighi ihe iwu kwesiri ime.
Ọtụtụ di na nwunye lụrụ
Mana dịka a ga - asị na nke ahụ ezughi ihe m gwarala ruo ugbu a, ekwesiri ịmara na ọtụtụ ndị di na nwunye Pekingese, ihe karịrị mmadụ 16.400 lụrụ n’ụbọchị ahụ. Ebumnuche bụ na ụbọchị 08.08.08 nwere ike ịpụta na akwụkwọ alụmdi na nwunye ha, ihe ndị di na nwunye chere na ọ ga-ewetara nnukwu ọchichọ na alụmdi na nwunye ha.
Ka di na nwunye niile chọrọ ịlụ di na nwunye taa wee debanye aha na mpaghara ndị isi obodo Beijing (Chaoyang, Haidian, Dongcheng, Xicheng, Chongwen, Xuanwu, Fengtai na Shijingshan) ha mepere ọfịs ha na awa 12 na-erughị isii nke ụtụtụ ruo elekere isii nke ehihie. Enwekwara ndị ọrụ mgbakwunye iji gaa arịrịọ niile ma n'ụzọ anụ ahụ ma n'ịntanetị. N’ihi ya, ndị chọrọ ịlụ di na nwunye n’ụbọchị ahụ nwere ike ime ngwa ngwa n’enweghị ihe mgbochi.
Anwansi nke 8
You nwere ike ịsị na 8 bụ nọmba anwansi maka ndị China, mana ọ dịkwa ọtụtụ ndị chere na 8 bụ akara nke enweghị njedebe na ọnụọgụ a nwere ike ịpụta ihe ọ bụla mmadụ chọrọ ka ọ pụta. 8 bụ ọnụ ọgụgụ nke ezigbo ihu ọma maka ọtụtụ na enweghị mgbagha na-enweghị isi maka ndị China.
Na Chinese astrology enwere akara iri asatọ, na ochichi ha enwere ndi isi ala eze 8, ha nwere isi okwu 8 ma nwekwa ugwu 8 di nkpa nye ha. Ọtụtụ mmadụ na-anwa ịnwa ọnụọgụ 8 dị na ndụ ha ka ha wee nwee ike nwee nnukwu akụ na ụba na ndụ ha.
Nọmba 9 dịkwa mkpa
Ndị China oge ochie lere nọmba anya dị ka akụkụ dị omimi nke eluigwe na ala. Dika onu ogugu dika nke adighi dika 9, o gha agha na udi "yang" na-anọchi anya ike na oke nwoke. Na China oge ochie nọmba 1 na-anọchite nọmba mbido, ebe ọnụọgụ itoolu na-anọchi anya enweghị njedebe na njedebe, ọ bụ ya mere a na-ahụkwa nọmba 9 n'ọtụtụ akụkụ nke ndụ na China. Iji maa atụ, n’obí eze ma ọ bụ n’ebe obibi ndị mọnk, ọnụ ụzọ, windo, steepụ ma ọ bụ ngwa ndị dị adị na-abụkarị ọtụtụ ugboro itoolu ma ọ bụ nọmba nwere 9.
Maka ndị China, ọnụọgụ so na udi nke "ying" na nọmba adịghị iche na "yang". Ndị China na-ahụkarị ndụ. Yabụ mgbe mgbanwe mere na ndụ ọ na - abụkarị nsonaazụ nke mgbanwe na - emegide ya. Ihe nnọchianya dịka 9 nke gosipụtara akụkụ ahụ na ọdịnala China bụkwa ịdọ aka na ntị, oge ntụgharị nke a ga-elebara anya iji mụta ihe, itolite, mụọ ụwa, gbanwee ma gbanwee.
Na ọdịnala ndị China, nọmba itoolu nwekwara nnukwu ihe ọ pụtara. Ihe atụ ọzọ bụ na ụbọchị nke iteghete nke ọnwa nke iteghete abụwo nnukwu emume dị na China. Ọ bụ ememme a maara dị ka Ememme Double Yang.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » China » Nọmba anwansi nke China
Obodo ndị dị mkpa nke Albania
10 nnukwu Blue Flag osimiri na Spain